Забур 21 CARS - Nnwom 21 ASCB
1Ao Awurade, ɔhene no anigye wɔ wʼahoɔden mu.
Nʼani gye mmorosoɔ wɔ nkonimdie a wo ma no nti!
2Woama no deɛ nʼakoma pɛ;
woamfa nʼabisadeɛ ankame no.
3Wode nhyira a ɛdi mu hyiaa no
na wode sikakɔkɔɔ amapa ahenkyɛ hyɛɛ no.
4Ɔbisaa wo hɔ nkwa, na wode maa no,
nna tentene a ɛnni awieeɛ.
5Nkonimdie a woma no enti, nʼanimuonyam so;
wode kɛseyɛ ne anidie adom no.
6Ampa ara, woama no nhyira a ɛnsa da
na wo nsrahwɛ ama me ho ahosɛpɛ me.
7Ɔhene no de ne ho to Awurade so;
Ɔsorosoroni no nokorɛ dɔ no enti,
8Wo nsa bɛka wʼatamfoɔ nyinaa;
wo nsa nifa bɛsɔ wɔn a wɔkyiri woɔ mu.
9Ɛberɛ a wobɛyi wo ho adi no
wobɛyɛ wɔn sɛ fononoo a emu adɔ.
Awurade firi nʼabufuhyeɛ mu bɛmene wɔn,
na ne ogya no ahye wɔn.
10Wobɛtɔre wɔn ase wɔ asase so,
na wɔn asefoɔ afiri adasamma mu.
11Ɛwom sɛ wɔbɔ pɔ tia wo
na wɔyɛ nhyehyɛeɛ bɔne, nanso wɔrenni nkonim;
12ɛfiri sɛ wobɛma wɔasane wɔn akyi
ɛberɛ a woatwe bɛmma akyerɛ wɔn so.
13Yɛma wo so, Ao Awurade, wɔ wʼahoɔden mu;
yɛbɛto nnwom na yɛakamfo wo kɛseyɛ.
ASCB : Nnwom 21